I-Nebraska Man - I-Evolution Hoax
Iingcamango ze-Evolution ziye zisoloko ziba ngongqiniswano , kwaye ziqhubeka ziba ngamaxesha anamhlanje. Nangona iinqununu zikhwaza ukuba zifumane "ikhonkco elahlekileyo" okanye amathambo okhokho babantu bamandulo ukuba bangeze kwiirekhodi zezinto eziphilayo kunye nokuqokelela idatha engaphezulu ukuze bavuselele iingcamango zabo, abanye baye bazama ukuthatha izinto ezandleni zabo baza badala iifossil abazibiza "ikhonkco ekhoyo" yokuziphendukela komntu.
Okubaluleke kakhulu, iPowertdown Man yayinomdla wolululwazi ukuthetha iminyaka engama-40 ngaphambi kokugqitywa ngokuqinisekileyo. Olunye ufumano "lwekhonkco elahlekileyo" eyaba yinto ebizwa ngokuba yiNebraska Man.
Mhlawumbi igama elithi "hoax" lincinci ukusetyenziswa kwimeko yeNebraska Man, kuba yayingakumbi kwimeko yento engafanelekanga kuyo yonke into yokukhwabanisa njengomntu wePiltdown. Ngomnyaka we-1917, umlimi kunye nenxalenye yexesha leengcali egama linguHarold Cook owayehlala e-Nebraska wathola inyo elilodwa elibukeka lifana nelophu okanye umntu. Emva kweminyaka emihlanu kamva, wayithumela ukuba ihlolwe nguHenry Osborn e-Columbia University. U-Osborn wamemezela ngokukhawuleza le ntsipho ukuba ibe yinyithi evela kwiyokuqala eyayifumene nendoda enjengeNorth America.
Inyo elilodwa lakhula ekuthandeni nakwihlabathi lonke kwaye kwakungekho ixesha ngaphambi kokuba umzobo weNebraska Man uboniswe kwixesha le-London.
Ukukhishwa kwesikhalazo kwinqaku elihamba nalo mzekeliso lenza kucacile ukuba umzobo wayecinga ukuba umntu waseNebraska wayebukeka njani, nangona kuphela ubungqina be-anatomical bokuthi ubukho bukho buyi-single molar. U-Osborn wayeqine kakhulu ukuba kwakungekho nantoni na umntu onokukwazi ukuba yintoni le nto esandula ukuyifumana ifumaneka njengeyozinyo kunye nokugxotha umfanekiso obala.
Abaninzi baseNgilani ababebona imidwebo babengaqinisekanga ukuba i-hominid yafunyanwa eNyakatho Melika. Enyanisweni, enye yezinzululwazi eziphambili eziye zahlola kwaye zanikeza i-Piltdown Man hoax yayingenakuphikisa kwaye yathi i-hominid yaseMntla Melika ayifumananga ingqiqo kwinqanaba lomlando wobomi emhlabeni. Emva kwexesha elidlulileyo, u-Osborn wavuma ukuba lezinyo ingabi yokhokho wabantu, kodwa yayiqinisekisile ukuba ubuncinci bezinyo ezivela kwi-api elalixhambile kwi-ukhokho oqhelekileyo njengemigudu yabantu.
Ngowe-1927, emva kokuvavanya loo ndawo inyosi yafunyanwa kwaye yafumanisa iifostile ezininzi kuloo ndawo, ekugqibeleni wagqiba isigxina seNebraska sabantu sasingekho kwi-hominid emva kwayo yonke into. Enyanisweni, kwakungekho nakwi-ape okanye nayiphi na ukhokho kumhla wokuziphendukela komntu. Izinyo zajika zaba ngumbusi weengulube kwixesha lePleistocene. Zonke ezinye iisifuba zafunyanwa kwindawo efanayo loo nto ivela kuyo kwaye yafunyaniswa ukuba ifane nekrele.
Nangona i-Nebraska Man yayifutshane "ikhonkco elahlekileyo", ichaza ngesifundo esibaluleke kakhulu kubafundi be-paleontologists kunye nabavubukuli abasebenza kwintsimi. Nangona uxwebhu olulodwa lukhangeleka ukuba luyinto engangena kumngxuma kwi-rekodi yezinto eziphilayo, kufuneka ifundwe kwaye ubuninzi bobungqina obuninzi bufunyenwe ngaphambi kokuvakalisa ukuba kukho into engekho.
Esi siyisiseko esisisiseko senzululwazi apho ukufunyanwa kwezinto zesayensi kufuneka kuqinisekiswe kwaye kuhlolwe ngabangcali bezenzululwazi ukwenzela ukubonisa ubungqina babo. Ngaphandle kwesi sikhokelo kunye neenkqubo zokulinganisela, amaninzi amaninzi okanye iimpazamo ziya kuvela kwaye zidibanise iziphumo zenzululwazi zinyani.
Imiba Ekholisayo NgamaPenguphu
'UYakobi' kunye 'noDego' bangabelana ngemvelaphi efanayo
Njengo Jodi Picoult? Emva koko zama ezi ncwadi
Ubani Ndimele Ndithume Izibhengezo Zami?
'La Danse de Mardi Gras' iCanjun Mardi Gras Ingoma
Indlela yokwenza iPlié epheleleyo